Axdi-qarameedka adduunyada ee aan rabshaduhu dhicin - World March
Bogga ugu weyn » Warqad loogu talagalay duni la'aan rabshado
“Charter for a World aan rabshad lahayn” waa natiijada sanado badan oo shaqo ay qabteen shaqsiyaad iyo ururo ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel. Qoraalkii ugu horreeyay waxaa lagu soo bandhigay Shirweynihii Toddobaad ee Abaalmarinta Nobel ee 2006 waxaana nuqulkii ugu dambeeyay lagu ansixiyay Shirkii Siddeedaad ee Bishii Diseembar 2007 ee Rome. Qodobbada aragtida iyo soo-jeedintu waxay aad ugu eg yihiin kuwa aan halkan ku aragno Maarso.
11 ee Bishii Noofembar ee 2009, intii lagu jiray Shirweynihii tobnaad ee Dunida ee lagu qabtey Berlin, ayaa ku guuleystey Nobel Peace Prize waxay u soo bandhigeen jaartarka adduunyo bilaa rabshado ah dhiirrigeliyayaasha World March for Peace iyo shuban Waxay u noqonayaan inay noqdaan emissaries dukumiinti ahaan qayb ka mid ah dadaalkooda si kor loogu qaado wacyigelinta guud ee ku saabsan rabshadaha. Silo, oo ah aasaasaha maslaxadda caalamiga ah ee caalamiga ah iyo waxyoonihii dunida ee Maarso, ayaa ka hadlay arrinta Macnaha Nabadgelyada iyo Dagaal-la'aanta wakhtigaas.
Rabshadu waa cudur la saadaalin karo
Majirto Gobol ama Shaqsi amaan ku nabad geli kara adduun amni xumo. Qiyamka rabshadaha ayaa joogsaday inay noqdaan wax kale oo lagu noqdo baahi, labadaba ujeedo, sida fikradaha iyo ficilada. Qiyamtan ayaa lagu muujiyey sida ay u adeegsanayaan xiriirka ka dhexeeya dowladaha, kooxaha iyo shakhsiyaadka. Waxaan aaminsanahay in u hogaansanaanta mabaadi'da rabshadaha in ay soo bandhigi doonto nidaam ilbaxnimo iyo xasillooni adduunyo badan, kaas oo dowlad cadaalad ah oo wax ku ool ah lagu gaari karo, ixtiraamka sharafta aadanaha iyo karaamada nolosha lafteeda.
Dhaqamadeenna, sheekooyinkeenna iyo nolosheenna shaqsiyadeed waa isku xiran yihiin oo ficilladeenna waa isku xiran yihiin. Maanta sidii horeba, waxaan aaminsanahay inaan wajahayno run: annagayadu waa aafo wadaag. Yoolkaasi waxaa lagu go'aamin doonaa ujeedadeena, go'aannadeena iyo ficilladeena maanta.
Waxaan si adag u aaminsanahay in abuurista dhaqanka nabadda iyo rabshadaha aan ahayn rabshadu ay tahay himilo qoto dheer oo muhiim ah, xitaa haddii ay tahay geedi socod dheer oo adag. Xaqiijinta mabaadiida lagu caddeeyey Axdigaas waa tallaabo muhim ah oo muhiim ah oo lagu xaqiijinayo badbaadada iyo horumarinta bani-aadmiga isla markaana lagu gaaro adduun aan rabshad lahayn. Anaga, dadka iyo ururada la siiyo abaalmarinta Nobel Peace Prize,
Dib-u-xoojin annaga oo ka go'an xaqiijinta Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha,
Walaacsan tahay in loo baahdo in la joojiyo faafidda rabshadaha heerarka kala duwan ee bulshada iyo, intaa ka sarreeya, halisaha caalamku kuugu hanjabay jiritaanka bini-aadannimada;
Dib-u-xoojin in xoriyada fikirka iyo muujinta ay ku jiraan asalka dimoqraadiyada iyo hal-abuurka;
Aqoonsiga rabshadaha in teedu siyaabo badan, sidoo kale sida isku dhacyada hubeysan, Shuqulkiinnu military, saboolnimada, dhiig-miirashada dhaqaale, burburinta deegaanka, musuqmaasuqa iyo nacayb ku salaysan jinsiyad, diin, jinsi ama nooca galmada;
Dayactirka in lagu ammaano rabshadaha, sida lagu muujiyay ganacsiga madadaalada, waxay gacan ka geysan kartaa aqbalaadda rabshadaha sida xaalad caadi ah oo la aqbalo;
Ku qancay in kuwa ugu waxyeeloobey rabshadaha ay yihiin kuwa ugu nugul iyo kuwa ugu nugul;
Iyadoo la tixgelinayo Nabadgelyo ma aha oo kaliya maqnaanshaha rabshad laakiin sidoo kale joogitaanka caddaaladda iyo daryeelka dadka;
Tixgelinta in aqoonsi aan ku filnayn ee kala duwanaanshaha qowmiyadaha, dhaqanka iyo diinta ee qeybaha Dowladaha ay asalkoodu ka mid yihiin colaadaha badan ee ka jira adduunka;
Aqoonsiga deg-degga ah ee loo wajahayo qaab kale oo loo maro amniga wadajirka ah oo ku saleysan nidaam uusan dal, ama koox dalal ah, ugu yeelan karin hub nukliyeer amnigeeda;
Aqoonta in dunidu ubaahan tahay farsamooyinka caalamiga ah iyo hababka aan dagaal ahayn ee ka hortagga iskahorimaadka iyo xallinta, iyo in kuwani ay yihiin kuwa ugu guuleysta marka la qaato marxaladda ugu horraysa;
Xaqiijinta in kuwa dareenka awoodda leh ay leeyihiin masuuliyada ugu weyn in la joojiyo rabshadaha, meel kasta oo ay ka muuqato lafteeda, iyo inay ka hortagto mar kasta oo ay macquul tahay;
Ku qancay in mabaadi'da aan rabshad lahayn ay ku guulaystaan ​​dhammaan heerarka bulshada, iyo sidoo kale xiriirka ka dhaxeeya Dawladaha iyo shakhsiyaadka;
Waxaan ugu baaqeynaa beesha caalamka in ay u hoggaansamaan horumarinta mabaadiida soo socota:
Marka la eego adduunka isku-dhafan, ka-hortagga iyo joojinta khilaafaadka hubeysan ee u dhaxeeya Dawladaha iyo dawlad-goboleedyada waxay u baahan yihiin ficil wadajir ah oo ka socda beesha caalamka. Habka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo amniga shaqsiyaadka shakhsi ahaaneed waa in la hormariyo amniga bini'aadamka caalamka Tani waxay u baahan tahay xoojinta awooda hirgelinta nidaamka Qaramada Midoobay iyo hay'adaha iskaashiga goboleed.
Si loo gaaro adduun aan rabshad lahayn, dowladuhu waa inay had iyo jeer ixtiraamaan xukunka sharciga iyo inay qaddariyaan heshiiskooda sharciga ah.
Waa lagama maarmaan in la sii wado iyada oo aan dib loo dhigin dhinaca hubinta hubka nukliyeerka iyo hub kale oo burburin ah. Dawladaha haysta hubka noocaas ah waa inay qaadaan tallaabooyin la taaban karo oo ku saabsan hub ka dhigista iyo in ay qaataan nidaam difaac oo aan ku salaysneyn ciriiriga nukliyeerka. Isla markaa, Dawladuhu waa inay ku dadaalaan sidii loo xoojin lahaa nidaamka nukliyeerka aan xoojin, sidoo kale xoojinta xaqiijinta dalxiiska, ilaalinta qalabka nukliyeerka iyo samaynta hub ka dhigis.
Si loo yareeyo rabshadaha bulshada, wax soo saarka iyo iibinta hubka yar yar waa in la dhimay iyo si adag gacanta heer caalami ah, heer qaran, gobol, degmo iyo. Intaa waxaa dheer, waa inuu jiraa fulinta a total iyo caalamiga ah ee heshiisyada caalamiga ah ee hub ka dhigista, sida Treaty ku Ban Mine ku 1997, iyo taageero dadaallada cusub si loo baabi'iyo saameynta hubka aan loo meel dayin iyo firfircoonaan by dhibanayaasha, sida garbaha ciidda.
Argagixisnimadu marnaba lama aqbali karo, sababtoo ah rabshadu waxay abuurtaa rabsho iyo sababtoo ah fal argagixisnimo ah oo aan lid ku aheyn dadka rayidka ah ee waddan kasta waxaa lagu dari karaa magaca sabab kasta. Dagaalka ka dhanka ah argagixisannimada maaha, si kastaba ha ahaatee, sababaha xadgudubka xuquuqda aadanaha, sharciga caalamiga ah ee bani'aadamnimada, caadooyinka bulshada rayidka ah iyo dimuqraadiyadda.
Joojinta rabshadaha qoyska iyo qoyska waxay u baahan tahay ixtiraam shuruud la'aan ah sinnaanta, xorriyadda, sharafta iyo xuquuqda haweenka, ragga iyo carruurta, dhinaca dhammaan shakhsiyaadka iyo hay'adaha Dawladda, diinta iyo bulshada rayidka ah. Mas'uuliyadaha noocan oo kale ah waa in lagu daraa sharciyada iyo heshiisyada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah.
shaqsi iyo dawlad kasta oo mas'uuliyad saamiyada si looga hortago rabshadaha ka dhanka ah carruurta iyo dhallinyarada, kuwaas oo ay matalaan mustaqbalka caadiga ah iyo hantida ugu qiimaha badan, iyo kor u qaadida fursadaha waxbarasho, helitaanka daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, ammaanka qof ahaaneed, ilaalinta bulshada iyo jawi taageera kuwaas oo xoojiya rabshad aan ahayn hab nololeed. waxbarashada nabadda si ay u dardar nacaybku iyo xoogga naxariistay sida tayada dhalin ah aadanaha waa in ay qayb muhiim ah barnaamijyada waxbarashada ee heer kasta.
Looga hortago colaadaha ka timi yaraadan ee khayraadka dabiiciga ah iyo gaar ahaan ilaha biyaha iyo tamarta, waxay u baahan tahay Maraykanka yeeshaan door firfircoon iyo machadka nidaamka sharciga ah oo lagu daydo ka go'an in ay ilaalinta deegaanka iyo dhiiri xasilin ah Isticmaalka ku salaysan helitaanka ilaha iyo baahida dhabta ah ee aadanaha
Waxaan ugu baaqeynaa Qaramada Midoobay iyo wadamada xubnaha ka ah si loo hormariyo aqoonsiga macnaha leh ee jinsiyada, dhaqanka iyo kala duwanaanshaha diinta. Xeerka dahabiga ah ee adduunka aan dagaalameynin waa: "Ula dhaqmi kuwa kale sida aad jeclaan lahayd in loola dhaqmo."
The qalab siyaasadeed maamulaha in Abuuran dunida a non-dulmiga badan yihiin shaqeeya hay'adaha iyo wada-xaajoodka dimuqraadi ah oo ku salaysan si sharaf leh, aqoon iyo dadaalka, ay qabatay ku saleysan dheelitirka u dhexeeya labada dhinac, iyo, halka ay ku habboon, ilaalinta maanka sidoo kale qaybaha bulshada bani-aadamka guud ahaan iyo jawiga dabiiciga ah ee ay ku nool yihiin.
Dhamaan Dawladaha, hay'adaha iyo shakhsiyaadka waa in ay ku taageeraan dadaallada looga hortagayo sinaan la'aanta ee qaybinta kheyraadka dhaqaalaha oo ay xalliyaan sinnaanyo waaweyn oo abuuraya dhul bacrimin ah oo ku saabsan rabshadaha. Farqiga u dhexeeya xaaladaha nololeed ee aan macquul ahayn waxay keenaysaa fursado la'aan iyo, xaalado badan, rajo darro.
bulshada rayidka ah, oo ay ku jiraan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, pacifists iyo dhaq-dhaqaaqayaan deegaanka waa in la aqoonsadaa lana ilaaliyo sida lagama maarmaan ah in la dhiso dunida a soo xirin sida dowladaha oo dhan waa in ay muwaadiniinteeda iyo in aan la ka soo horjeeda. Xaaladaha waa in la abuuraa si loogu oggolaado lana dhiirigeliyo ka qaybgalka bulshada rayidka ah, gaar ahaan haweenka, geedi socodka siyaasadeed ee heerarka caalamiga ah, heer gobol, heer qaran iyo heer degaan.
Markii aan hirgalineyno mabaadii'da Axdiga, waxaan u jeedsan nahay dhammaanteen si aan uga wada shaqeyno adduunyo cadaalad iyo dil leh, oo qof walba uu xaq u leeyahay in aan la dilin, isla mar ahaantaana, waajibka ah in aan la dilin qofkasta
Saxeexa Axdiga ku yaal adduunyo dagaal la'aan
para daaweyso nooc kasta oo rabsho aan dhiiri cilmi sayniska ee beerihii dhexgalka aadanaha iyo wada hadal, oo annana waxaannu ugu yeedhi bulshooyinka tacliimeed, sayniska iyo diinta si ay uga caawiyaan in guurka bulshada a non-rabshad iyo non-dilka. Saxeexa Jaartarka aduunka ee aan lahayn rabshad
Quduusnimadiisa Dalai Lama
Dhakhaatiirta Caalamiga ah ee Ka Hortagga Dagaalka Nukliyeerka
Hay'adda Wakaalada Caalamiga ah ee Tamarta
Guddiga Adeegyada Saaxiibada ee Mareykanka
Dawlada hoose ee Cagliari, Italy
Gobolka Cagliari, Talyaaniga
Dawlada hoose ee Villa Verde (OR), Talyaaniga
Dawlada Hoose ee Grosseto, Italy
Degmada Lesignano de 'Bagni (PR), Talyaaniga
Dawlada Hoose ee Bagno a Ripoli (FI), Talyaaniga
Dawlada hoose ee Castel Bolognese (RA), Talyaaniga
Dawlada hoose ee Cava Manara (PV), Italy
Dawlada hoose ee hargabka (RA), Talyaaniga
Peace Peace, Belfast, Waqooyiga Ireland
Ururka xusuusta Collettiva, Ururka
Adduunyo dagaal iyo dagaal la'aan
Xarunta Caalamiga ah ee Daraasaadka Dabiiciga ah (CMEH)
Bulshada (horumarinta aadanaha), Xiriirka Caalamiga ah
Isu-imaatinka Dhaqamada, Xiriirka Adduunka
Xiriirka Caalamiga ee Xisbiyada
Ururka "Cádiz ee loogu talagalay rabshadaha", Spain
Haweenka loogu talo galay isbedelka caalamiga ah ee International Foundation, (Boqortooyada Ingiriiska, India, Israel, Cameroon, Nigeria)
Machadka Nabadda iyo Daraasaadka Cilmiga, Pakistan
Ururka Assocodecha, Mozambique
Awaz Foundation, Xarunta Adeegyada Horumarinta, Pakistan
Eurafrica, Ururka Dhaqamada Kala Duwan, Faransiiska
Ciyaaraha Nabadda UISP, Talyaaniga
Naadiga Moebius, Argentina
Centro per lo sviluppo hal abuur leh “Danilo Dolci”, Talyaaniga
Machadka Amniga Caalamiga, Mareykanka
Gruppo Degdega Alto Casertano, Talyaaniga
Il sentiero del Dharma, Talyaaniga
Gocce di fraternità, Talyaaniga
Associazione Lodisolidale, Talyaaniga
Waxbarashada Xuquuqda Aadanaha iyo Wada Shaqeynta Kahortaga Khilaafaadka, Isbaanish
Ururka Dhallinyarada Xuquuqda Aadanaha, Talyaaniga
Athenaeum ee Petare, Venezuela
Ururka dhaqanka ee CÉGEP ee Sherbrooke, Quebec, Canada
Xiriirka Hay'adaha gaarka loo leeyahay ee Daryeelka Carruurta, Dhallinta iyo Qoyska (FIPAN), Venezuela
Xarunta Communautaire Jeunesse Unie de Parc Extension, Québec, Canada
Dhakhaatiirta loogu talagalay Badbaadada Caalamiga ah, Kanada
UMOVE (United Hooyooyinka Ka Soo Horjeeda Rabshadaha Meelkasta), Kanada
Riding Grannies, Kanada
Halyeeyayaal Ka Soo Horjeeda Nuclear Arms, Canada
Xarunta Barashada Isbadelka, Jaamacadda Toronto, Canada
Dhiirrigeliyaasha Nabadda iyo Rabshadda, Spain
ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), Talyaaniga
Legautonomie Veneto, Talyaaniga
UISP Lega Nazionale Attività Subacquee, Talyaaniga
Komishanka Giustizia e Pace di CGP-CIMI, Italy
Mr. Walter Veltroni, Duqii hore ee Rome, Talyaaniga
Mr. Tadatoshi Akiba, Madaxweynaha Duqa Nabadda iyo Duqa Magaalada Hiroshima
Mr. Agazio Loiero, Gudoomiyaha Gobolka Calabria, Talyaaniga
Prof. MS Swaminathan, Madaxweynihii hore ee Shirweynihii Pugwash ee Sayniska iyo Arimaha Dunida, Ururka Nobel Peace Prize Organization
David T. Ives, Machadka Albert Schweitzer
Jonathan Granoff, Madaxweynaha Machadka Caalamiga ee Amniga
George Clooney, jilaa
Don Cheadle, jilaa
Bob Geldof, heesta
Tomás Hirsch, afhayeenka arrimaha dadka ee Latin America
Michel Ussene, afhayeenka Humanism ee Afrika
Giorgio Schultze, Afhayeenka Humanism ee Yurub
Chris Wells, Af-hayeenka Banii-adamnimada Waqooyiga Ameerika
Sudhir Gandotra, af hayeenka aadamiga ee gobolka Aasiya-Pacific
Maria Luisa Chiofalo, La-Taliyaha Dowladda Hoose ee Pisa, Talyaaniga
Silvia Amodeo, Madaxweynaha Hay'ada Meridion, Argentina
Miloud Rezzouki, Madaxweynaha Ururka ACODEC, Morocco
Angela Fioroni, Xoghayaha Gobolka ee Legautonomie Lombardia, Italy
Luis Gutiérrez Esparza, Madaxweynaha Latin America Circle ee Daraasaadka Caalamiga ah (LACIS), Mexico
Vittorio Agnoletto, xubin hore uga ahaa baarlamaanka Yurub, Talyaaniga
Lorenzo Guzzeloni, Duqa magaalada Novate Milanese (MI), Talyaaniga
Mohammad Zia-ur-Rehman, Isuduwaha Qaranka ee GCAP-Pakistan
Raffaele Cortesi, Duqa Magaalada Lugo (RA), Talyaaniga
Rodrigo Carazo, Madaxweynihii hore ee Costa Rica
Lucia Bursi, Duqa magaalada Maranello (MO), Talyaaniga
Miloslav Vlček, Madaxweynaha Rugta Wakiilada ee Czech Republic
Simone Gamberini, Duqa magaalada Casalecchio di Reno (BO), Talyaaniga
Lella Costa, Aktarka, Talyaaniga
Luisa Morgantini, gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Yurub, Talyaaniga
Birgitta Jónsdóttir, xubin ka tirsan baarlamaanka Icelandic, madaxweynaha saaxiibbada Tibet ee Iceland
Timóteo, João Antonio, Juliana Cardoso Alfredinho Penna ("Jabhadda Barlamaanka ee La Socodka Bisha Maarso ee Nabadda iyo Não Violência ee São Paulo"), Brazil
Katrín Jakobsdóttir, Wasiirka Waxbarashada, Dhaqanka iyo Sayniska, Iceland
Loredana Ferrara, Lataliyaha gobolka Prato, Italy
Ali Abu Awwad, Firfircoonida nabada iyada oo loo marayo kacdoon la'aan, Falastiin
Giovanni Giuliari, Lataliyaha degmada Vicenza, Italy
Rémy Pagani, Duqa magaalada Geneva, Switzerland
Paolo Cecconi, Duqa magaalada Vernio (PO), Talyaaniga
Viviana Pozzebon, heesaa, Argentina
Max Delupi, wariye iyo darawal, Argentina
Páva Zsolt, Duqa Magaalada Pécs, Hungary
György Gemesi, Duqa Magaalada Gödöllő, Madaxweynaha Dowladaha Hoose, Hungary
Agust Einarsson, madaxa dib-u-dhiska Jaamacadda Bifröst University, Iceland
Svandís Svavarsdóttir, Wasiirka Deegaanka, Iceland
Sigmundur Ernir Rúnarsson, xubin ka tirsan baarlamaanka, Iceland
Margrét Tryggvadóttir, xubin ka tirsan baarlamaanka, Iceland
Vigdís Hauksdóttir, xubin ka tirsan baarlamaanka, Iceland
Anna Pála Sverrisdóttir, xubin ka ah baarlamaanka, Iceland
Thráinn Bertelsson, xubin ka tirsan baarlamaanka, Iceland
Sigurður Ingi Jóhannesson, xubin ka tirsan baarlamaanka, Iceland
Omar Mar Jonsson, Duqa magaalada Sudavikurhreppur, Iceland
Raul Sanchez, Xoghayaha Xuquuqda Aadanaha ee gobolka Cordoba, Argentina
Emiliano Zerbini, Muusigiste, Argentina
Asmundur Fridriksson, Duqa Magaalada Gardur, Iceland
Ingibjorg Eyfells, Maamulaha Iskuulka, Geislabaugur, Reykjavik, Iceland
Audur Hrolfsdottir, Maamulaha Iskuulka, Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Iceland
Andrea Olivero, Madaxweynaha Qaranka ee Acli, Talyaaniga
Dennis J. Kucinich, xubin ka tirsan Kongareeska, USA